Mgbụsị akwụkwọ Series a haziri Holms SK | Holmbygden.se
Ihe na 22 August, 2013 site Holmbygden.se
Six ìgwè ga mpi maka 4:ihe
N'ihi Holm si uru bụ na ọ bụ nanị asaa nke asatọ ìgwè nwere ike na-aga ke div. 4. Medelpads Football Association mara ọkwa na IFK Sundsvall 3 ike na-enwe ọganihu na afọ, agụ mere n'okpuru. Eleghị anya na-Fränsta ik avhängda na-ekwesịghị mejupụtara a iyi egwu na-eji ire ụtọ n'elu agha. N'ihi ya, ọ anya na-isii ìgwè ekpe onye ga-alụ ọgụ maka Division 4 2014.
Ugbu a n'oge mgbụsị akwụkwọ usoro a haziri maka Medelpad Football. Na na Holm SK bịara na n'elu ọkara nke usoro ruo eruo na otu Division 5 ikom Fall na ga-mere-alụ ọgụ maka nkwalite nke anọ ọkwa. Ya na ya si mgbe oge ga-ìgwè 75 % nke ha ihe na ha, nke gara aga nzukọ megide usụhọde ìgwè ga-adịghị mkpa karịa mgbụsị akwụkwọ agba nke playoffs.
N'ụzọ na-eju evenly finals
Ọ ga-abụ a nnọọ ezigbo playoffs a daa mgbe asaa nke asatọ ìgwè bụ nanị n'ime ihe atọ. Ihe ọ bụla nwere ike ime eme na ihe ọ bụla egwuregwu bụ incredibly mkpa. INA Sundsvall 3 nwere ike ghara ịga n'ihi na ha na-ama nwere otu ìgwè na-anọ ọkwa na i nwere ike naanị otu ìgwè kwa club kwa usoro. Om n'ọdụ ụgbọ mmiri INA 2 na-aga site 4:ihe (nke ha na-eme ugbu a) ha ga-N'ezie nwere ya. Otú ọ dị, ọ dịghị ekwe omume “izute na mbuli”, nke mere na IFK 2 na 3 interchanged n'etiti div. 4 na 5. ihere INA 3 gaa dị otú ahụ ikpe ala div. 6 (ma ọ bụrụ na ọ na-akawanye ọ bụla dị otú ahụ, a ukperedem ibuot…).
ma ọ bụrụ na egwuregwu- na-emega. Mụta otú ị nwere ike mfe na-etinye ha na gị mobile kalenda.
+ Holmbygden.se/table - Isiokwu, ọkụ wdg.
+ Holmbygden.se/hskkalender – Mmekọrịta ọkụ / ọzụzụ sessions na gị mobile ma ọ bụ Google kalenda!
Mgbụsị akwụkwọ endgame table taa